ပြည်ပအခြေစိုက်ခဲ့သော မဇ္စျိမကို ဦးဆန်နီဆွေ ဝယ်ယူကာ ဦးဆောင်မည်
ပြည်ပအခြေစိုက်ဖြစ်ခဲ့သော မဇ္ဈိမသတင်းဌာနကို စစ်ထောက်လှမ်းအရာရှိဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဆွေ၏သား ဦးဆန်နီဆွေက CEO အဖြစ် ဦးဆောင်ကာ Mizzima Media Group အဖြစ် ပြောင်းလဲထူထောင်လိုက်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ကို ရော့စ်ဒန်ကလေနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ထူထောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည့် ဦးဆန်နီဆွေသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးသိမ်းဝေ၊ မဇ္စျိမသတင်းဌာန ထူထောင်သူ ဦးစိုးမြင့်တို့နှင့် ၃ဦး အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီတွင် ၁၉၉၉၌ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနအဖြစ် စတင်ထူထောင်ခဲ့သည့် ဦးစိုးမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်အခြေချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲထူထောင်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီအသစ်၌ အယ်ဒီတာချုပ်ရာထူး ယူသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ဦးဆန်နီဆွေ၏ အစုရှယ်ယာများကို အစားထိုးဝယ်ယူခဲ့သည့် ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးနှင့် ဇနီးတို့သည် မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေနေသော ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်းရန် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားပြီး ရော့စ် ဒန်ကလေနှင့် တရားမမှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည်။
မြန်မာတိုင်းမ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော သတင်းထောက်များ၊ အယ်ဒီတာများသည် ဦးဆန်နီဆွေ ဦးထောင်ထူထောင်လိုက်သော မဇ္စျိမမီဒီယာဂရုပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်တော့မည်ဆိုသည့် သတင်းများ ပေါ်ထွက်နေသည်။ ပြည်ပရောက် သတင်းဌာနဖြစ်ခဲ့သည့် မဇ္စျိမသည် နေ့စဉ်သတင်းစာကို စတင်ထုတ်ဝေနေပြီး ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်သော ပထမဆုံး မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင် စက်လှေတစ်စီး ရေအောက်ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိနစ်မြုပ်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁
၁.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့၁၀၁၅အချိန် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ တံတားမြို့နယ်ခွဲ၊ (၁)ရပ်ကွက်နေ အေးဆွေ (ဘ)ဦးမြတ်သောင်း၊ မောင်းနှင်သော အလျား ၃၅ ပေ၊ အနံ ၈ ပေ၊ ရေစူး ၆ ပေရှိပြီး မြင်းကောင်ရေ (၂၂)ကောင်အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားသော အောင်ငြိမ်းချမ်းအမည်ရှိ သစ်သားစက်လှေသည် ရှမ်းချောင်းကျေးရွာမှ ကျောက်တန်းမြို့သို့ ကျပ်သိန်း(၆၀)တန်ဘိုးရှိ ဆန်အိတ် (၃၁၄)အိတ်ကို တင်ဆောင်မောင်းနှင်လာရာ ကျောက်တန်းမြို့၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတားဆိပ်အနီးကမ်းစပ်နှင့်ကိုက်(၁၀၀)ခန့်
အကွာအရောက်တွင် ရေအောက်ရှိ ကျောက်ဆောင်နှင့်တိုက်မိကာ စက်လှေဝမ်းဗိုက်ပေါက်၍နစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ စက်လှေနစ်မြုပ်စဉ် စက်လှေပေါ်ပါသူ ဦးသန်းလွင်၊ ဦးမောင်မြင့်နှင့် စက်လှေမောင်း အေးဆွေတို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြကြောင်း၊
ရေယာဉ်ပေါ်တွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်အောင် ၀န်ပိုများတင်ဆောင်၍
ပေါ့လျော့စွာမောင်းနှင်သူ စက်လှေမောင်း အေးဆွေအား
ကျောက်တန်းမြို့မရဲစခန်း(ပ) ၂၇၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၂ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက် ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထင်ရှားတဲ့ ကိုရီးယားအဆိုတော်မလေးတွေ အတော်များများက ကိုယ်ခန္ဓာ ပြေပြစ်တာကြောင့် သူတို့ထဲက တချို့ဟာ မော်ဒယ်လိုင်းဘက်မှာလည်း ခြေချထားကြတယ်လို့ နယူးယောက်အခြေစိုက် KpopStarz အွန်လိုင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် Lee Hyori က ၂၀၀၆ မှာတော့ ကြေးအများဆုံး ရတဲ့ အမျိုးသမီး အဆိုတော် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူက အုပ်စုနဲ့လည်း ဆိုသလို၊ တကိုယ်တော်အနေနဲ့လည်း အောင်မြင်သူပါ။ ဒီအဆိုတော်က သက်သတ်လွတ် စားတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းသည် Lee Sang-soon လိုပဲ သူလည်း တိရစ္ဆာန် အခွင့်အရေး လှုံ့ဆော်တဲ့ သူပါ။ ဒီအရေးကို လှုံ့ဆော်ရင်းနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့ကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲက တခြား ကိုရီးယားအထင်ကရများလို ဧည့်သည် ရာထောင်ချီ မဖိတ်ဘူး၊ ဧည့်သည် ၉၀ လောက်ပဲ တက်ရောက်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါတယ် တဲ့။
ကမ္ဘာကျော် MARIE CLAIRE မဂ္ဂဇင်းမှာ သူ့ပုံရိပ်တွေ ထည့်သွင်း ဖော်ပြလာတဲ့အတွက် ဒီအချက်ကြောင့် သူက တခြားသော ကိုရီးယားအထင်ကရများထက် သာသွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နောက် အထင်ကရ တယောက်ကတော့ Park Han Byul ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူ့ကို အဆိုတော်ထက် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးအဖြစ်ပဲ လူသိများမယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတချို့မှာလည်း သူ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အထင်ကရ တံဆိပ်တခုကို ကြော်ငြာပေးနေတဲ့ Park Han Byul
G.NA လို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော် Gina Jane Choi က အသက် ၂၄ နှစ်ပါ၊ အစောပိုင်းမှာတော့ သူက သူတို့ဆီက နာမည်ကြီးတဲ့ Cube Entertainment ဆိုတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် တဲ့။
သူ့အကြောင်းကိုတော့ အွန်လိုင်းမှာ များများစားစား မတွေ့ရပါ။
အဆိုတော် NS Yoon-G က ငယ်ငယ်ကတည်းက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယးပြည်နယ်ကို ရွှေ့ခဲ့သူပါ။ အဲဒီဒေသမျာ နာမည်ကြီးတဲ့ UCLA တက္ကသိုလ်ကနေ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့သူပါ။
ကိုရီးယားလှိုင်းက ကြီးမားတဲ့အတွက် တခြားနိုင်ငံများကို ကိုရီးယားအထင်ကရတွေ သွားရောက် ဖျော်ဖြေကြပါတယ်။ NS Yoon-G လည်း ဗီယက်နမ်တို့ ဘာတို့ကို သွားရောက် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့အသက်က ၂၅ နှစ်လို့ ဆိုပါတယ်။
NS Yoon-Gကိုရီးယားလှိုင်းက မြန်မာတွေကြားထဲကိုလည်း ရိုက်ခတ်နေတာကြောင် ဒီ ဧရာဝတီဘလော့မှာ ကိုရီးယားပေါ့ပ်လောက အထင်ကရများအကြောင်း အလျဉ်းသင့်သလို ဆက်လက် ဖော်ပြပါမယ်။
ကော်ပီကြေး သိန်း ၅၀ တောင်းတဲ့ ကျောင်းအုပ်မြင့်မြင့်စန်း (ကျောင်းသားမိဘတဦးပေးစာ)
TTC ဆို တာ အစဉ်အလာ ကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး ကျောင်းပါ။ ဒီကျောင်းက ဆရာမ တွေ ဟာ ငွေ တစ်ခုထဲ ကြောင့် အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကျောင်းကြီး က ဆရာမ ဖြစ်ရတာနဲ့ တင် ဂုဏ်ယူစွာ အလုပ်လုပ် နေကြတဲ့ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ပညာတတ်တွေပါ။
အ ပြောအဆို ကြမ်းတဲ့ ကျောင်းအုပ် ကို ပညာရှိ နည်း နဲ့ ဖယ်ခွာ ကြတာပါ။ ဒါကို သိတဲ့ သူက အပြောင်းအလဲ တွေ စလုပ်ပါတယ်။ ဆရာမတွေ ကို အတန်းတွေ ဘာသာ ရပ်တွေ ပြောင်းပစ်ပါတယ်။ အ ပေါစားဆန်တဲ့ စည်းရုံးရေး နဲ့ သူနဲ့ အလျင်းသင့်သူတွေ ကို ဘာသာရပ်ကောင်း အတန်းကောင်းတွေပေးပါတယ်။
ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဟာ မိမိ အာဏာ တည်မြဲ ဖို့ ပြောင်းအလဲ လုပ်တာ လက်ခံ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ် လုပ်အပေါ် တာဝန်ယူမှု ရှိ ရပါမယ်။
ဥပမာ kg က လေးတန်းကို သုံးတန်း ဆရာမ နဲ့ ချိန်းပါတယ်။ ဆရာမြ ကီး ဒေါ်ခင်ဝင်းအောင် လက်ထက် က Kg ဆရာမ တွေ ကို ပညာရေး သုတေသန က ကို ဖွင့်တဲ့ preschool training ကို အရင်တက်ခိုင်းခဲ့ ပါတယ်။ ရန်ကင်းကျောင်းအုပ်ြ ကီးတွေ လည်းဒီသင် တန်း ကို တက်ဖူးကြပါတယ်။
စာစ သင် စ ကလေးအရွယ် ဟာ အ ရေး အသား အလွန် အရေးြ ကီးပါတယ်။ ကျမ သမီး အတန်းပိုင် ရ ကောက်ရေးတာ ၇ လို့ ရေးပါတယ်။ တော်သေးလို့ ညွှန်ချုပ်ြ ကီးသိသွာြး ပီး နောက်နှစ် Kg ဆရာမ များ training ပြန် တက် ရ မယ် ပြောပါတယ်။ နောက် ကလေးတွေ အတွက် ဝမ်းသာ စရာ ဖြစ်ပေမဲ့ ကျမ သမီးနဲ့ ကျမ တော်တော် ပြန်သင်ရပါတယ်။ သူ့ ဆရာမ ကမှ အမှန်ထင်တာလေ။
ကျောင်းစ က ကျောင်းအုပ် ကြီး ကို ဒီကိစ္စ ကျမပြောပါတယ်။ သူက training တော့ မသွားခိုင်းဘူး
စာတွေ မိတ္တူ ကူးပြီး ဖတ်ခိုင်းတယ်စာကူးခ သိန်း၅၀ ကျော်လောက် ကုန်တယ် လို့ ပြောတော့ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ ကျမ သူဘာပြောချင် လည်းကောင်းငေ်းသဘောပေါက်ပြီး ဆက်မပြောတော့ပါ။
သူက ကျမက ဒီ ကျောင်းမှာ မြေစမ်းခရမ်းပျိုး အလုပ်လုပ်နေရတာတဲ့။
အော် TTC လို မြေဆီမြေနှစ်ကောင်းပြီးသားကျောင်း ကို သူက ခရမ်းပျိုးနေရ တယ်ဆိုတော့ ကျောင်းသူဟောင်းတစ်ဦးအ နေ နဲ့ ရင် ထဲ မှာ နင့်နေအောင် ခံစားမိပါတော့တယ်။
Credit : Practising High School, Yangon Institute of Education (TTC), မတရားမှု၊ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု၊လာဘ်စားမှုတွေ ဒီမှာလာရင်ဖွင့်ပါ။
လူနာ DIC ဝင်မဝင်ဆိုတာကို ဘယ်လိုဆေးစစ်ချက်တွေနဲ့ ဆိုသိနိုင်မလဲ ဆရာ။ DIC နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အသိပညာရမဲ့ ဆရာ့ ဆောင်းမှန်သမျှ အသိပညာရပါတယ်။ အားရင်တင်ပေးပါဆရာ။
• Disseminated intravascular coagulation (DIC) ကို Disseminated intravascular coagulopathy နဲ့ Consumptive coagulopathy လို့လဲခေါ်တယ်။
• DIC ဆိုတာ ရောဂါတခုခုကနေဆက်ဖြစ်တဲ့ သွေးခဲစနစ်ရောဂါတခုဖြစ်တယ်။ တကိုယ်လုံက သွေးကြောလေးတွေထဲမှာ သွေးခဲတွေဖြစ်လာစေတယ်။ ခွဲစိတ်ရာကနေဆက်ဖြစ်ရင် ခွဲတဲ့နေရာ အရေပြား၊ အစာခြေလမ်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းတွေမှာ သွေးယိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးခဲကနေ ကျောက်ကပ်စတာတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။
• အဆုပ်ကင်ဆာ၊ သရက်ရွက်ကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာတွေကနေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ။်
• ကိုယ်ဝန် အတွင်းထဲအချင်းကွာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊ ရေမြွာရည်သွေးကြောပိတ်ခြင်းနဲ့ ကလေး အထဲမှာသေဆုံးခြင်းတွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြီးကျယ်ခြင်း၊ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း၊ အကြီးစား ခွဲစိတ်မှုတွေကနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်အပြင်တခြားပိုးတွေကနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုးဝင်တာတွေရဲ့ ၃ဝ-၅ဝ%မှာဖြစ်တယ်။
• ဆေးရုံတက်လူနာ ၁% အထိဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဆိုးတဲ့အသဲရောဂါတွေ၊ မြွေကိုက်တာ၊ ရှော့ခ်ရတာတွေကနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• သွေးသွင်ရာကနေ အဆင်မပြေလို့လဲဖြစ်တယ်။
• လူနာဟာ အခြေအနေဆိုးတခုမှာရောက်နေပြီ။ ရှော့ခ်ရနေတာလဲဖြစ်မယ်။ သွေးယိုတာတွေရှိနေမယ်။
• သွေးစစ်ကြည့်ရင် သွေးမှုံနည်းနေမယ်။ (ပရိုသရွန်ဘင်) အချိန်ရှည်နေမယ်။ (ဖိုက်ဘရင်နိုဂျင်) နည်းနေမယ်။
• ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲသိရင် ပြင်ရမယ်။
• သွေးမခဲဆေးပေးရတာ နည်းပါတယ်။
• Platelets 5,000-10,000/mm3 ထက်နည်းရင် သွေးမှုံသွင်းပေးရတယ်။
• Antithrombin သွင်းတာလဲ တခါတလေလုပ်တယ်။
• ၁ဝ-၅ဝ% ဆုံးပါးနိုင်တယ်။
• ကိုယ်ဝန်ပျက်-ဖျက်ရာပိုးဝင်ရာကနေဖြစ်ရင် ၅ဝ% သေနိုင်တယ်။
တရုတ်ပြည်က တင်သွင်းသော လျှပ်စစ်မီးပူများကတစ်ဆင့် ရုရှားကို ထောက်လှမ်းဟုဆို
မော်စကို၊ အောက်တိုဘာ ၃၁
တရုတ်ပြည်ကတစ်ဆင့် ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းလာသော လျှပ်စစ် မီးပူများတွင် မိုက်ခရိုဖုန်းများနှင့် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ် Wi-Fi များကို တပ်ဆင် ထားသောကြောင့် ထောက်လှမ်းရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သံသယရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် ရုပ်သံဌာန တစ်ခုဖြစ်သည့် Rossiya ရုပ်သံက ထုတ်လွှင့် ကြေညာလိုက်သည်။
ထိုအဝတ်မီးပူ များထဲတွင်ပါသည့် ကွန်ရက်များသည် ပေပေါင်း ၆၅၀ အတွင်းရှိ အခြားသော ကွန်ပျူတာများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိကာ ဗိုင်းရပ်စ်များ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ကူးစက်ခြင်း များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်ပိုင် ရုပ်သံဌာန၏ ကြေညာချက်ကြောင့် ယခုအခါ ရောင်းချသည့် စတိုးဆိုင်ကြီးများတွင် အကာအကွယ်အတွက် ပြင်ဆင်နေကြရပြီး မိမိတို့ထံမှ ဒေတာ အချက်အလက်များ ခိုးယူမည်ကို လွန်စွာ စိုးရိမ်နေကြရသည်။
ထိုမီးပူများ မည်မျှပျံ့နှံ့နေပြီး မည်သည့် မီးပူများတွင် ထောက်လှမ်းရေး စနစ်များပါကြောင်း မသိရသေးသော်လည်း၊ ကြိုးမဲ့စနစ်နှင့် ဝင်ရောက် ထောက်လှမ်း နိုင်သောကြောင့် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များကို လုံခြုံစိတ်ချရစေရေးအတွက် Password ထားပြီး သုံးကြရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားသည်။
စက်သုံးဆီများ အရည်အသွေးပြည့်၊ မပြည့် ရွေ့လျားဓာတ်ခွဲခန်းဖြင့် စစ်ဆေးမည်ဟုဆို
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီများ၏ အရည်အသွေးပြည့်မီခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ရွေ့လျားဓာတ်ခွဲခန်းများဖြင့် စတင်စစ်ဆေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော စက်သုံးဆီများကို သန်လျင်ရေနံချက်စက်ရုံရှိ သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးပြီးမှသာ ရောင်းချခွင့်ရှိသော်လည်းစစ်ဆေးပြီး စက်သုံးဆီဆိုင်များသည် ဈေးကွက်သို့ အမှန်တကယ်အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် စက်သုံးဆီများ ရောင်းချခြင်း ရှိ၊ မရှိကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ထက်မနည်း ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုများကို ဒီဇင်ဘာမှစတင်၍ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
““အရင်ကတော့ တင်သွင်းလာတဲ့ဆီကို စစ်ဆေးပြီး လက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဆိုင်တစ်ခုချင်းစီ ချက်ချင်းစစ်ဆေးလို့မရတော့ ဒီလိုမိုဘိုင်းစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ ဒီသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းက နာရီပိုင်းအတွင်း အရည်အသွေးပြည့်မီခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကို စစ်ဆေးပေးမယ်””ဟု မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
စက်သုံးဆီ အရည်အသွေးများ စစ်ဆေးရန်အတွက် ထိုင်း နိုင်ငံအခြေစိုက် PTTEP ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရန် ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီက ရွေ့လျားဓာတ်ခွဲခန်းပါကားတစ်စီး လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပြီး ၀န်ကြီးဌာန ကလည်း ကားငါးစီးတင်ဒါခေါ်ယူ ထားသည်။ PTTEP ကုမ္ပဏီမှ လှူ ဒါန်းထားသည့် ကားသည် နိုဝင် ဘာတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး တင် ဒါခေါ်ယူထားသည့် ကားများသည်လည်း နိုဝင်ဘာဒုတိယအပတ်တွင် တင်ဒါပိတ်မည် ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေး မပြည့်မီသည့် ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များ တွေ့ရှိပါက စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း အရေးယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ချိန်တွယ်မပြည့်မီသော ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များကို ၀န်ကြီးဌာနက ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စစ်ဆေးကာ ဆိုင်ပိတ်သိမ်းခြင်းဖြင့် အရေးယူထားသည်။
အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ချိန်တွယ်ပြည့်မီမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းကို တစ်ပြိုင်တည်းမလုပ်ဆောင်ဘဲ အပိုင်းလိုက်ခွဲ၍ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပိုင် စက်သုံးဆီဆိုင်များကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့ရာ ယခုအခါ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် ၁၀၃၇ ဆိုင် ရှိပြီးဖြစ်ပြီး သိုလှောင်ကန်သုံးခုနှင့် သင်္ဘောများကိုလိုက်လံဆီဖြည့်သည့် ရွေ့လျားသင်္ဘော ခြောက်စီးရှိသည်။
KNU/KNLA မှ ထုတ်ပယ်ထားသူတစ်ဦး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအယောင်ဆောင်၍ လိုင်စင်မဲ့ကား ၄၇ စီး ထုတ်ယူခဲ့ဟုဆို
လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNU/KNLA မှ ထုတ်ပယ်ထားသည့် စောမောင်မောင်ဆိုသူသည် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအယောင်ဆောင်၍ လိုင်စင်မဲ့ကား ၄၇ စီး ထုတ်ယူထားခဲ့ကြောင်း KNU/KNLA မှ သတင်း ရရှိသည်။
နိုင်ငံတော်မှ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်သည့် တပ်ဖွဲ့များကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုင်စင်မဲ့ကားများ စီးနင်းခွင့်ထုတ်ပေးခြင်းကို အဆိုပါ စောမောင်မောင်ဆိုသူက ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအယောင်ဆောင်၍ လက်မှတ်များအတုပြုလုပ်၍ ကားစီးနင်းခွင့်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောအောင်လင်းကပြောသည်။
ထိုသူသည် တပ်မတော်၏ ရာထူးအဆင့်ဖြစ်သည့် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ရာထူးတံဆိပ်များကို KNU/ KNLA ၏ ယူနီဖောင်းတွင် တပ်ဆင်သုံးစွဲခဲ့၍ အဖွဲ့အစည်းကို နိုင်ငံတော်မှပေးအပ်သည့် အခွင့်အရေးများကို အယောင်ဆောင် တောင်းခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ်စောထူးဂေက အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားသည်။
““သူက ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာကြောင့် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒါက တော်တော်အဟန့်အတားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ကိုဖမ်းပြီးတာနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ ဗဟိုကို ပြန်ခေါ်သွားမှာပါ””ဟု ဗိုလ်မှူးစောအောင်လင်းကပြောသည်။
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကားစီးနင်းခွင့် (သို့မဟုတ်) လိုင်စင်များကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သလဲ ဆိုသည်ကိုမူ ဖမ်းဆီးမိ၍ စစ်ဆေးပြီးမှသာ သိနိုင်မည်ဟု KNU/KNLA ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်သိန်းက ပြောသည်။
““ပြည်သူတွေကို ကားရမယ်။ လိုင်စင်ရအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောတာလို့ ကြားရတယ်။ သူ့အိမ်မှာဝင်ရှာတော့ သူ့ နာမည်နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ၄၇ စီးရှိတဲ့ စာရွက်တွေ တွေ့ရှိတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်လဲတော့ မသိဘူး။ ဖမ်းဖို့လည်း လုပ်နေတယ်။ နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ တားဆီးသွားမှာပါ”” ဟု ဦးအောင်ကျော်သိန်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်) ၂၅ နှစ်မြောက် ငွေရတု အခမ်းအနားကို ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (လိုင်ဇာမြို့)မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် အဖွဲ့ရဲ့ ၂၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနား မိန့်ခွန်းမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲက “ဒီနေ့ကာလဟာ ကျနော်တို့တွေအနေနဲ့ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင် မရောက်သေးပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့တတွေဟာ ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ နည်းပရိယာယ်အရ အားလုံးလိုလားတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်မြောက်ဖို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ မဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့အတူ လက်တွဲ ကြိုးပမ်းမယ်။ တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ ဒီကြိုးပမ်းမှုမှာ ကျနော်တို့ ရပ်တည်မှုကတော့ အဖိနှိပ်ခံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံဘက်က မကဒတ အနေနဲ့ အလေးအနက်ရပ်တည်သွားမယ်” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ရည်ရွယ်ချက် သုံးရပ်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဆလိုင်းယောအောင်က အခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
“ပထမအဆင့်က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဒုတိယအဆင့်က အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတရပ်ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ တတိယအဆင့်ကတော့ တိုင်းရင်းသား တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ကို အခြေခံတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတရပ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတရပ်ကို အခြေခံပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”
ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်း ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတမှုနဲ့ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုအဖွဲ့ကပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာကို အခုနှစ်မကုန်မီ ထုတ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဦးဆလိုင်းယောအောင်က ဆက်လက် ပြောပါတယ်။
အခမ်းအနားကို ဗကသ၊ လူဘောင်သစ်စတဲ့ အဖွဲ့တွေအပြင် ကေအိုင်အေ/ကေအိုင်အိုနဲ့ လိုင်ဇာညီလာခံကို တက်ရောက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လမှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်) နဲ့ အစိုးရ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ၁၉၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
by ကိုဈာန် - DVB
အချိန်ပိုခိုင်းတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို အရေးယူဖို့ လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေး
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အတွင်းမှာ အစိုးရကနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်ထက်ပိုပြီး အချိန်ပိုခိုင်းတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ လူမှုဖူလုံရေး ဒုဝန်ကြီးဦးထင်အောင်က အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်နေ့မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်သမားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ဆဌမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ပြည်ထောင်စုလွတ် တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် ဥက္ကဌအဖြစ်တာ ၀န်ယူဆောင်ရွက်တဲ့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး မျှတရေးကော်မရှင်ကနေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာရှိတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြောတာက အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ဒုဝန်ကြီးပါ၊ ကျနော်တို့က အစီရင်ခံစာ တင်ထားတာပေါ့နော်၊ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစီရင်ခံစာအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ သူတို့က ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ထား ပါတယ် ဆိုတာကို ဖြေကြားတာပါ။ အဓိကတော့ အလုပ်သမားဟာ အခြေခံလစာ နည်းနေတော့ အချိန်ပိုလုပ်အားခဟာ သူတို့ ပြောသလို သူတို့ခိုင်းချင်သလို ခိုင်းလို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာ။”
အလုပ်သမားတွေ အချိန်ပို လုပ်ကိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေ အတွက် တနေ့ ၃နာရီနဲ့ စနေနေ့မှာ ၅နာရီ တပတ်မှာ အချိန်ပို ၂၀နာရီသာ အလုပ်ခိုင်းစေရမဲ့အကြောင်း၊ အဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် တနေ့ ၂နာရီ ၄၀မိနစ်နဲ့ ၆ရက်မှာ ၁၆နာရီသာ အချိန်ပို အလုပ်ခိုင်းစေရမယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
အချိန်ပို အလုပ်ခိုင်းစေမယ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ကို တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှုမရှိရင် အလုပ်ရှင်ကို အရေးယူသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အလုပ်သမား အလုပ်ရှင်ပြဿနာတွေ၊ အချိန်ပို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခတွေသတ်မှတ်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေသစ်ရေးဆွဲရေး အတွက်လည်း ကြိုးစားနေပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည် စီစစ်နေပြီလို့ ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အလုပ်ချိန်အကြာကြီး လုပ်ကြရပြီး လုပ်အားခ အနည်းငယ်သာ ရရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကို အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေက စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ခေတ်သစ် ကျွန်သဘောက်လို့ အမည်ရတဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလည်း ရေဒီယို သြစတြေးလျသတင်းထောက် မြတ်မိုးက သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
အစိုးရဝန်ထမ်းများ တာဝန်ကျေပွန်ရေး လစာလုံလောက် ရန်လိုဟုဆို
ရန်ကုန် ၊ အောက်တိုဘာ ၃၁။ ။ အ စိုးရဝန်ထမ်းများ မိမိအလုပ်ကိုချစ် ပြီး တာဝန်ကျေပွန်စွာလုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လစာရရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု က ရင် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး က ပြောသည်။
''အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အား လုံး ကိုယ့်အလုပ်ကိုချစ်ပြီး တာ ဝန်ကျေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လစာလောက်အောင် ပေးရမယ်။ လုံလောက်တဲ့ လစာရှိရင်အကျင့် ပျက်ခြစားမှုတွေ လျော့နည်းလာ မယ်''ဟု ကရင်တိုင်းရင်းသားရေး ရာဝန်ကြီး ဦးစောထွန်းအောင် မြင့်ကဆိုသည်။
''အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆို တာက နှစ်မျိုးရှိတယ်။ လောဘ ကြောင့် မတရားလာဘ်စားတာရယ်၊မလောက်ငလို့လာဘ်စားရတာရယ် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အစိုးရ ဝန်ထမ်း၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ ပြင်ပ ဝင်ငွေလုံးဝမရဘဲ လစာလေးနဲ့ ရပ်တည်နေရပြီး ဝန်ကြီးဌာနလည် ပတ်ဖို့ ဘဏ္ဍာငွေမရတဲ့ဝန်ကြီး ဌာန တွေရှိတယ်။ ခုလောလောဆယ် မှာ ဝန်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ တစ်လဝင် ငွေ ကျပ်လေးသိန်းခွဲနဲ့ ရပ်တည် နေရပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာ သတ်မှတ်ထားတာက တော့ ဝန်ကြီးတစ်ဦးကိုကျပ်သိန်း ၂၀ လောက်ရမယ် လို့ပြဋ္ဌာန်းထား ပေမယ့် ပြည်သူတွေအတွက်လျှော့ ယူထားရပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း မရရင်တောင် လောက်င တဲ့ အတိုင်းအတာအထိ ရရှိရင်ပို ကောင်းပါမယ်''ဟု အစိုးရအဆင့် မြင့် ဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကိုလူချော တစ်ယောက် အခုတစ်လောအလွန်ဝလာသဖြင့် အလွန်စိတ်ညစ်နေသည်။
စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်း သတင်းစာကို ယူကြည့်ရာ
ကြော်ဋ္ဌာတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသည်။
ကြော်ငြာဋ္ဌာနက... သင်၏ အဆီများကျဖို့ 
ကျွန်တော်တို့ ကတာဝန်ယူပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း မည်မျှကျချင်ကြောင်းသာ
ဖုန်းနံပါတ်...........သာဆက်သွယ်လိုက်ပါဟု တွေ့ ရသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြည့်
``ဟုတ်ကဲ့ Slim Body Group
ပေါင်မည်မျှကျချင်ကြောင်း ပြောပြပါ`` ဟုပြန်ဖြေလေသည်။
ထိ်ုအခါ ကိုလူချော.....တစ်ပတ်အတွင်း ၅ပေါင်ကျချင်ကြောင်းပြောရာ
တစ်ဖက်မှ...````ဟုတ်ကဲ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
နောက်နေ့ မနက် အိမ်တံခါးခေါက်၍ သွားဖွင့်ရာ....ငယ်ရွယ်ချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေး
တစ်ယောက် အားကစားဝတ်စုံ ၀တ်လျှက် စောင့်နေသည်ကို တွေ့ ရလေသည်။ သူမ၏
လည်ပင်းတွင် ကတ်ပြားတစ်ခုချိတ်ဆွဲထား၍ ဖတ်ကြည့်ရာ.....
ပြေးထွက်သွားရာ ကိုလူချောလည်း မှီအောင်လိုက်ရတော့သည်။
၂မိုင်လောက်ပြေးလိုက်မှ ထိုမိန်းကလေးကို မိတော့သည်။ ဒီလိုနှင့်
၅ပေါင်ကျသွားကြောင်းတွေ့ ရသည်။ ကိုလူချောချာတစ်ယောက်
ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့်စောင့်နေ သည်ကို တွေ့ ရပြန်သည်။ ထိုမိန်းကလေး၏
ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပတ်ပြည့်၍ ပေါင်ချိန်ကြည့်ရာ တစ်ကယ်
၁၀ပေါင်ကျသွားလေသည်။ ကိုလူချောတစ်ယောက် လောဘတက်လေပြီ။ ၂ ပတ်အတွင်း
ပေါင် ၅၀ ကျချင်ကြောင်းအကြောင်းကြားရာ ထို Group က ထိုအစီအစဉ်မှာ
လွန်စွာ ပင်ပန်းကြောင်းနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါင်ချလျှင်လည်း
ရနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။ သို့ သော်ကိုလူချောက
တံခါးသွားဖွင့်ရာ....တံခါးတွင်...ထောင်ထောင်မောင်း မောင်း သန်သန်မာမာ
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ ရ၍ အံအားသင့်သွားသည်။ ထိုသူ၏ လည်ပင်းတွင်
လွတ်အောင်ပြေး...မိရင် 'ဟွင်းဟွင်းဟွင်း' ..ဟူ၍ဖြစ်လေသတည်း....။
အထာကျတဲ့ အာဂ ဟာသများ
သို့ ချစ်သော အမေ
အမေ့သားကြီ စာရေးလိုက်တယ် ဖေတို့ မေတို့ အဆင်ပြေကြရဲ့လား ဟိုတလောတုန်းက မြို့ပေါ်က သူဌေးကြီးတစ်ယောက် လယ်သမားတွေ လယ်ထဲ ပင်ပန်းနေကြတာ မကြည့်ရက်လို့ လယ်တွေ အကုန်သိမ်းသွားတယ်လို့ကြားလို့ အမေတို့ အရင်လို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးဆိုပြီး သားဖြင့်ကျေးဇူးတွေတင်နေတာ သားလဲ အဆင်ပြေပါတယ် ရက်ကွက်ကလဲ သားကို ဟောက်စ်ဆင်းနေတဲ့ ဆရာဝန်ပေါက်စမှန်းသိလို့ တစ်ခုခုဆို လာလာခေါ်ကြတယ် မနေ့ကလေးတင် ဘေးအိမ်က ကြောင်မကြီး ကလေးလိုက်မွေးပေးလိုက်ရသေးတယ်
နေတာထိုင်တာကတော့ သိတဲ့အတိုင်း လစာလေး ၅၀၀၀၀ လောက်နဲ့ မလောက်တော့ သားအခု ဆရာဝန်ပီပီ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ အလုပ် ဖြစ်နေတယ် အခုဆို ဈေးထဲက အသားဆိုင်တော်တော်များများမှာ သား ရေမထိုးထားတဲ့ အသားဆိုင် မရှိသလောက်ပဲ
သွားတာ လာတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ် ဟိုတလောက စက်ဘီးလေး အင်ဂျင်ချထားလို့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲ သွားဖြစ်တယ် လမ်းတွေကလဲ အရင်ကလောက် မပိတ်တော့ပါဘူး အိပ်ယာလိပ်တော့ သယ်သွားတယ် မီးပွိုင့်တစ်ခါမိရင် ခင်းအိပ်ယုံပဲ သားအခု အရက်တွေဘာတွေလဲ အရင်လို သောက်ဖြစ်တော့ဘူး အခုဆို အိပ်နေချိန် အရက်မသောက်ဖြစ်တော့တာ ကြာပြီ
ဆေးရုံမှာလဲ အဆင်ပြေပါတယ် ဆေးရုံထဲကလူတွေကတောင် ချီးကျူးနေကြတယ် သားရယ် လူနာတွေ သနားရင် ဝဒ်ထဲ မနေပါနဲ့တဲ့ အခုတောင် ဘွဲ့လွန်တက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ် အမေရ ကျူရှင်တွေ ဘာတွေတက်ဖို့ ဆရာကြီးကို တိုင်ပင်တော့ ဆရာကြီးကလဲ အားပေးတယ် ပိုက်ဆံတွေ လျှောက်မဖြုန်းနဲ့တဲ့ ဒါပေမယ့် သဘောတော့ ကောင်းရှာပါတယ် သူ့စာအုပ်အဟောင်းတွေထုတ်ပေးပြီးတော့ ရသလောက်နဲ့ ရောင်းပြီးလက်ဖက်ရည် ဝယ်သောက်တဲ့
ခုတလော မီးကတော့ သိတဲ့ အတိုင်း ပျက်တလှည့် မလာတစ်လှည့် ဆိုတော့ ညဘက်စာဖတ်ချင်ရင် လမ်းမပေါ်တက်ပြီး လမ်းမီးနဲ့ ဖတ်ရတယ် သားကြိုးစားတာမြင်ပြီး ဖြတ်သွားတဲ့ ကားတွေကတောင် သြဘာပေးကြတယ် အေဘေးလေး သေချင်နေလားတဲ့
အခုလဲ ဆီးဂိမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရှမ်းကိုးမီး အသင်းမှာ လက်ရွေးစင်အဖြစ်ရွေးခံရလို့ နေပြည်တော် သွားရမယ်တဲ့ အဲ့ဒါ အဆင်ပြေရင် ပိုက်ဆံလေး ပို့ပေးလိုက်ပါလို့
အမေ့ရဲ့ ချစ်လွှစွာသော သားမောင်ဖွတ်
Credit to အိမ်ကြို အိမ်ကြား ပလပ်ကျွတ် ဖွတ်ကြား
တိုင်းနှစ်တိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေး ၀န်ကြီးများနှင့် မြေလုသည့် ပြဿနာ
မြေနုကျွန်း အငြင်းပွားမှု ပြဿနာများကြောင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ တိုင်းမှူးများ အထိပင် လာရောက်၍ ဖြေရှင်းခဲ့ ကြသော်လည်း အဆင်ပြေ အေးချမ်းမှုမရှိခဲ့ဘဲ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ သက္ကယ်ကျွန်း ကျေးရွာမှ လူအင်အားသုံး၍ လာရောက်အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပွား . . .
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပိုင် အလယ်ကင်း ကျေးရွာနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ သက္ကယ်ကျွန်း ကျေးရွာတို့၏ မြေနုကျွန်း အငြင်းပွားမှု ပြဿနာများကြောင့် တိုင်းခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ အကြိမ်ကြိမ် လာရောက်ကြရသလို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းမှူးများ အထိပင် လာရောက်၍ ဖြေရှင်း ခဲ့ကြသော်လည်း အဆင်ပြေ အေးချမ်းမှု မရှိခဲ့ဘဲ ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ သက္ကယ်ကျွန်း ကျေးရွာမှ လူအင်အားသုံး၍ လာရောက် အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုများတွင် ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရသည့် ကိုအောင်ထွန်းဝေက ““ကျွန်တော် ဒီမှာ ကိုင်းလုပ်ခဲ့တာ (၁၀)နှစ် ကျော်ပါပြီ။ လူပါလာပြီးနေတာက (၄) နှစ်ရှိပြီ။ ဒီလို လုပ်ကြမယ် မထင်ဘူး ပထမ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂုဏ်ပြုတဲ့ “ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တပ်မတော်ဖွဲ့လို့ ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းသံကြားလို့ နားထောင်နေရင်း လူတွေကလည်း များလိုက်တာ၊ ဘာလဲပေါ့ ကျွန်တော့် အိမ်နားလည်း ရောက်ရော အိမ်ကို ၀ိုင်းထားလိုက်ပြီး … အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုကျော်စိုးနဲ့ ကိုစိုးလွင်တို့ ၂ ယောက်က ရေပေါ်သောင်က လူတွေ အိမ်တွေ ဒီမှာ မမြင်ချင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အိမ် (၄) လုံး (၁) နာရီ အချိန်ပေးမယ် ဖျက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဖျက်ရင် ဘာမှရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကျွန်တော် အမျိုးမျိုး တောင်းပန်တယ် မရဘူး။ နာရီဝက်လောက် ကြာတော့ မအူပင်နဲ့ ဆီးပင်တွေကို ခုတ်လှဲတယ်။ အပင်တွေက တော်တော်ကြီးနေပြီး (၂၄) ပင် တောင်ရှိတာ။ အဲဒါတွေလည်းပြီးရော လူတွေဘက် လှည့်ပြီး ရန်ရှာ လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်””ဟု ကိုယ်တွေ့ ခံစားရမှုများကို ရှင်းပြသည်။
ထိုအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ကိုအောင်ထွန်းဝေ အပါအ၀င် အလယ်ကင်း ကျေးရွာမှ ကိုဝင်းထိုက်၊ ကိုညွန့်မောင်၊ ကိုမောင်ရင်၊ ကိုအုန်းငွေတို့၏ လူနေယာတဲများ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး အကြမ်းဖက် သူများသည် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သက္ကယ်ကျွန်းဘက်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြသောကြောင့် အခြေအနေမှာ ခေတ္တမျှ ငြိမ်သက် သွားခဲ့သော်လည်း ည(၈) နာရီခန့်တွင် အဆိုပါ လူအုပ်ကြီးက ဓာတ်မီးများ တ၀င်းဝင်းနှင့် သက္ကယ် ကျွန်းဘက်မှ ထပ်မံ၍ လာကြသည်ကို တွေ့မြင်ရသည့် အလယ်ကင်းကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများမှာ နီးစပ်ရာသို့ ဖုန်းများဖြင့် ဆက်သွယ် ခေါ်ဆို၍ လည်းကောင်း ဘာသာရေး/နာရေးများတွင် အသုံးပြုရန် အသင့်ရှိနေ ကြသည့် အသံချဲ့စက်များ၊ တောဓလေ့အရ နေအိမ်များတွင် လူခေါ်ရန်၊ အကြောင်းကြားရန် တပ်ဆင်ထား ကြသည့် အသံချဲ့စက်များ၊ ဗွီဒီယိုရုံများတွင် အသင့်ရှိနေကြသည့် အသံချဲ့စက်များ၊ ဆောင်းဘောက်စ်များဖြင့် အော်ဟစ် ခေါ်ဆို အကူအညီ တောင်းခံသံများကြောင့် အခြေအနေများ ပိုမို ရှုပ်ထွေးခဲ့ရပြီး မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အပါအ၀င် အဖျောက် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ စခန်းမှူး၊ ဒုရဲအုပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား (၁၅)ဦးမှ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ လုံခြုံရေး စီမံမှုများ လာရောက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရသည်။
““သူတို့က စနစ်တကျ စီစဉ်ထားကြတာဖြစ်မယ် ကြိုတင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ သဘောပဲ။ အဖွဲ့(၁)၊ အဖွဲ့(၂)၊ အဖွဲ့(၃) ဆိုပြီး ခေါ်သံတွေ ကြားနေရတယ်။ အိမ်တွေ ဖျက်တာ အဖွဲ့(၁)က ဖျက်တာ၊ ထမင်းထုပ်တွေ စီစဉ်ဖို့ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဉာဏ်မြင့်နဲ့ မနှင်းမြတ်မင်းဆိုပြီး အသံချဲ့စက်နဲ့ ခေါ်နေတဲ့ အသံတွေလည်း ကြားနေရတယ်။ အဖျက်ခံရတဲ့ အိမ်တွေက ကြောင်တွေ၊ ကြက်တွေကိုလည်း ယူသွားကြတယ်””ဟုဒေသခံ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခု အလယ်ကင်း ကျေးရွာသစ်သည် ယခင်အလယ်ကင်း ကျေးရွာကြီး ကမ်းပြို၍ ကျွန်းပျက်စီးခဲ့သော နေရာပင်ဖြစ်ပြီး ယခုတစ်ဖန်ပြန်၍ ကျွန်းပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်က ပြေစာပေါက် ဧက တစ်သောင်းခန့် ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ဧက (၄၀၀)ကျော်သာ ရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
““ပြည်သူ့ကောင်စီ လက်ထက် ၁၉၈၂-၈၃ လောက်က ရေပေါ်သောင်၊ ကြာအင်း၊ သက္ကယ်ကျွန်း၊ စိန်ကလေး၊ ကြွေပုဂံချောင်း၊ ရွာ (၅)ရွာ ရှိတဲ့ နယ်နိမိတ် (၅) ဦးစပ် ကျောက်တိုင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ အထိ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ခဲ့တာ။ အဲဒီနေရာကနေ နောက်ဆုတ် ပေးခဲ့ရတာ အခု ကျွန်တော်တို့ အလယ်ကင်း နယ်နိမိတ်အထိ ဆိုရင် ဧက ၄၂၀၀ ကျော်တယ်။ သက္ကယ်ကျွန်းဘက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တာ အဲဒါတောင် ခုထိ လာလုနေကြတုန်းပဲ””ဟုကိုင်း တောင်သူကြီး တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည့် ဦးသိန်းအေးက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ အလယ်ကင်းနှင့် သက္ကယ်ကျွန်းကျေးရွာ (၂) ရွာသည် ယခင်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဇလွန်မြို့နယ်အပိုင် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အလယ်ကင်းကျေးရွာသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ယခုကဲ့သို့ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်ရာ (၅)ဦးစပ် ကျောက်တိုင်ဖြစ်သည့် မြစ်ကို အရှေ့အနောက် ကန့်လန့်ဖြတ်၍ ကြွေပုဂံချောင်း ကိုငတင်လေး+ဒေါ်မယ်ပုထန်းပင်မှ စိန်ကလေး ဒေါ်မယ်စိန် အုန်းပင်သို့လည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်မှ တောင်ဘက်သို့ ချောင်းကြီး အောက်ဖျားမှ အလယ်(၅)ဦး စပ်ကျောက်တိုင် ၎င်းမှ သာရဝေါ လက်ပံပင်သို့ လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားချက်အား ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အလယ်ကင်း ကျေးရွာဘက်မှ လက်သင့်ခံမည် ဖြစ်သလို သက္ကယ်ကျွန်း ဘက်မှလည်း ပေါ်သစ်ကျွန်းအား ၃ ပုံ ၂ပုံ ခွဲဝေယူရန် သဘောထားရှိရာ ယခုချိန်ထိ ညှိနှိုင်းမှု မပြေလည်သေးဘဲ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဘက်မှ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အပါအ၀င် အင်အား (၃၀) ဖြင့် လုံခြုံရေး ယူပေးနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ၄င်းမြေနုကျွန်း အငြင်းပွားသည့် နေရာသို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးစန်းမောင်နှင့် ဦးစိုးမင်းတို့ လာရောက်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုကို အပြန်အလှန် ပြောခဲ့ကြောင်း၊ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားချိန် မတိုင်မီ အစိုးရ၀န်ကြီးများ လာရောက် ဖြေရှင်းပေးမည်ကို ဒေသခံများ မျှော်လင့် ခဲ့ကြသော်လည်း မလာရောက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ ကြံ့ခိုင်ရေး ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးသည် ကြားးဖြတ်ထောက်လှမ်းသည့် နေရာတစ်ခုဟုဆို
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးသည် အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်း
ဆက်သွယ်မှုများကို ကြားဖြတ်ထောက် လှမ်းသည့် နေရာတစ်နေရာ ဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ
လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ဆစ်ဒနီမောနင်းဟာရယ် သတင်းစာက ရေးသားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ အမေရိကန်သံရုံးသည် အမေရိကန်အမျိုး
သားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ (NSA) နှင့် ဗဟိုထောက် လှမ်းရေးအဖွဲ့(CIA)တို့က တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်သည့်
သတ်မှတ်ဝန်ထမ်း ခန့်ထားထောက်လှမ်းရာ အခြေစိုက်စခန်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အင်အက်စ် အေ
(NSA)၏ အကြီးအကဲဟောင်းဖြစ်သူ အက်ဒ၀တ်စနိုးဒင်ထံမှ ပေါက် ကြားသည့် မြေပုံတစ်ခုကို
ကိုးကားကာ ဆစ်ဒနီမောနင်းဟာရယ် သတင်းစာက ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောစခန်းများသည် တယ်လီ ဖုန်းဆက်သွယ်မှုများ၊အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် အခြား
အီလက်ထ ရောနစ် ဆက်သွယ်မှုများကို ကြားဖြတ်ထောက်လှမ်းမှုများ ကို ပြုလုပ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ
တစ်ဝှန်းတွင် အလားတူ စခန်းပေါင်း ၉၀ ရှိပြီး စခန်း ၇၄ ခုတွင် သတ်မှတ်ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ထား
ကာ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထောက်လှမ်းသည့်နေရာ ၁၄ ခုနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးမည့်
စခန်း ၂ ခုလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကြားဖြတ်ထောက်လှမ်းသည့်ကိစ္စကို သိရှိခြင်းမရှိသည့်အတွက် မှတ်ချက်ပေးစရာမရှိကြောင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ပြောရေး ဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က
အက်ဒ၀တ်စနိုးဒင်ထံမှ ပေါက်ကြားသည့် အချက်လက်များတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်
၎င်း၏မဟာမိတ်နိုင်ငံများမှ အကြီးအကဲများ၏ ဖုန်းများကိုလည်း ကြားဖြတ်နားထောင်ခဲ့ကြောင်း
ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်လမှစ၍ အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခံနေရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ဆက်ခံတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံများ ဖော်ဆောင်မည့် ပန်းတိုင်များကို အကောင်အထည် ဖော်ရန်သာမက ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိစေရေး အတွက်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခန်း ကဏ္ဍသည် အရေးပါကြောင်း Mr. Scot Marciel က မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားသည်။
အမေရိကန် အစိုးရသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်းက မြန်မာတပ်မတော်ကို အမေရိကန် တပ်မတော်၏ ထင်ရှားသော Cobra Gold စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို လေ့လာရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် အစောပိုင်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပဋိပက္ခကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရေးအတွက် ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
“အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရဲ့ နေရာ ယူလာမှုတွေကို ပေါ့ပေါ့လေး တွေးပြီး လွှတ်ထားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ မဟုတ်တာတွေကို လုပ်ဖို့ အားပေး အားမြှောက် လုပ်နေတာတွေကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြည့်နေတာပဲ။ ဝန်းကျင်မှာ ဒါတွေ ရှိနေမှတော့ မပျက်စီးချင်လည်း ပျက်စီးတော့မှာ သေချာတယ်”
ဒေါက်တာသာမာစီလန် (မလေးရှား ဆေးပညာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ)
မကြာသေးမီက မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းပေါ်သို့ အသက်ရှစ်နှစ်နှင့် ၁၀ အရွယ် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က အရွယ်မရောက်သေးသည့် ပထမတန်း ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို မဟားဒယားပြုကျင့်မှု ဗီဒီယိုပြကွက်များ တက်လာသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး တုန်လှုပ်ချောက်ချား သွားခဲ့ရသည်။ ကလေးတွေပဲဟု သာမန် အလေးမထားစရာ ကိစ္စဟု ထင်လိုက်လျှင် မှားသွားပေ လိမ့်မည်။ ဤအရွယ်လေးတွေက ဤကိစ္စကို နားလည်နေကြပြီ ဆိုခြင်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုလာပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုတွေ့ မြင်လိုက်ရသည်က လူသိအောင်လုပ် ပေးလိုက်သည့် ကိစ္စလေးတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး လူမသိ သူမသိနိုင်သော ကိစ္စပေါင်းများစွာ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနိုင်သေးသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက် များသည် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များကို ကိုယ်စားပြုနေသည့် စဉ်းစားစရာလည်း ဖြစ်နေသည်။ သူတို့ ဘာတွေ သိနေသလဲ၊ ဘယ်လောက် သိနေသလဲ၊ ဘာကြောင့် သိနေသလဲ ဆိုသည့် အကြောင်းများမှာ မေးစရာကိစ္စများ ဖြစ်လာသည်။
မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိ သိကျွမ်းသူများနှင့် ပတ်သက်နေကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံ ဆေးပညာအဖွဲ့ (MMA) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သာမာစီလန်က ဆိုပါသည်။
“မုဒိမ်းမှုဆိုတာ သဘောတူသည် ဖြစ်စေ၊ သဘော မတူသည်ဖြစ်စေ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ လိင်စိတ်ကို နိုးကြား တက်ကြွလာစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က စေ့ဆော်တဲ့ တွန်းအားတွေ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကို သတိ မမူတာတွေ၊ စူးစမ်းချင်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့သဘာဝကို လျစ်လျူရှုထား တာတွေဟာ ကလေးတွေကို ဒီလိုလုပ်အောင် တွန်းပို့နေ သလိုဖြစ်တယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ကလေးပီပီ စပ်စုခြင်းနှင့် သိချင်စိတ် ပြင်းပြခြင်းတို့ကို လူကြီးတွေက အချိန်မီ မထိန်းနိုင်လျှင် ကလေးများ မဟုတ်သည့်လမ်းသို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။ သူပြောသည့် တွန်းအားနှင့် စေ့စော်အား များဆိုသည်မှာ မူးယစ်ဆေး၊ အရက်နှင့် ကလေးများကို အလေးမထား လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဖြစ်သည်။
“မိဘတွေက အရေးကြီးတယ်။ သူတို့က အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူ နည်းတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုတွေမှာ ကလေးတွေကို ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အရှက်နဲ့ သိက္ခာတွေကို သင်ပေးဖို့ အချိန်မရှိဘူး။ သူတို့ကလည်း အဲဒါတွေကို အရေးကြီးမှန်း မသိကြဘူး။ မိသားစုအတွင်း ဒုက္ခတွေ ရောက်ပြီး စီးပွားရေးအဆင် မပြေကြရင် ပိုဆိုးသေးတယ်။ အဲဒီမိသားစုအတွင်း ကြီးပြင်းရတဲ့ သူတွေအတွက် ကတော့ အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်” ဟု ဒေါက်တာ သာမာက ဆိုသည်။
အချို့အချက်များကလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ ဖြစ်သည်။ ကလေးတွေ ဘာကြောင့် မဟုတ်တာ လုပ်သနည်းဆိုသည့် အချက်တွင် စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်မနှံ့ခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ထိုကလေးများကို အချိန်မီ မထိန်းသိမ်းနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် လျစ်လျူ ရှုထားလျှင်လည်း ဤအဖြစ်မျိုးများကို ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း သူက ထောက်ပြထားသည်။
မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယရဲမင်းကြီး ဟာမီဒါ ယူနွတ်က ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတိုင်မီအထိ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ သာမန်ပြစ်မှုဟု သတ်မှတ်ခံရလောက်သည့် အမှုများကို တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားသည်။
သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ကလေးသူငယ် လိင်မှုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ မမျှော်လင့်ဘဲ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မုဒိမ်းမှု ခုနစ်မှုနှင့် ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို ၁၃ မှုစလုံးသည် အသက် ၁၃ နှစ်အောက် မုဒိမ်းမှုများ ဖြစ်နေသည်။
ထိုကဲ့သို့ မကြုံစဖူး မုဒိမ်းမှုများ ဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကလည်း ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါသည်။ ကလေးသူငယ်များတွင် မဟုတ်တရုတ်ပုံများကို အချိန်မရွေး ကြည့်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ ရနေကြသည်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်တွင် ပက်ပက်စက်စက် တစ်တစ်ခွခွ ပုံများ၊ ဗီဒီယိုကားများကို မချိန်မရွေး ရယူကြည့်နိုင်သည်။ ထိုသို့ အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်စေရန် အတွက်လည်း မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များကို အလွယ်တကူ ဈေးပေါပေါနှင့် ဝယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကာမ ရာဂစိတ်များ လူကြီးတွေသာမက ကလေးတွေပါ အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲရန် အားမြှောက်ပြုသလို ဖြစ်နေကြောင်း မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုထားသည်။
“ကျွန်မ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးကြည့်တော့ သူက ဟင်ဒီစကားပြော ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ မင်းသမီးက မလုံ့တလုံ အဝတ်အစားလေးနဲ့ ကတာကို ကြည့်ပြီး ဒီလို ကျူးလွန်ဖြစ် သွားတာလို့ ပြောတယ်။ သူက အဲဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပြီး အသက် ၁၂ နှစ် သမီးလေးကိုသွားပြီး မဟားဒယား လုပ်တာ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်သွားတာတွေက သူ့မှာ အများကြီးပဲ။ အဲဒီလိုဟာတွေကို ဆောင်ထားရတယ် ဆိုတာကို သူ့အရွယ်လောက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိရတာလဲ။ သူက အဲဒီလို လုပ်ရတာတွေ၊ ဆောင်ရန်တွေကို အင်တာနက်ကနေ သိတာတဲ့လေ” ဟု ဒုတိယရဲမင်းကြီး ဟာမီဒါက ဆိုသည်။
ကလေးသူငယ်များသည် အထိန်းအကွပ်မရှိ အင်တာနက်သုံးခွင့်၊ ကြည့်ချင်ရာ ကြည့်ခွင့်များ ရနေသည့်အပေါ် ပြန်လည် စဉ်းစားရန် လိုကြောင်း ဟာမီဒါက ထောက်ပြထားသည်။
“သူတို့ အရွယ်တွေက ဘယ်ဟာက မှားပြီး ဘယ်ဟာက မှန်မှန်းသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း သူတို့ ကြည့်ရှုခံစားနေတာ တွေဟာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောမယ့်သူလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သူတို့ ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူမက ဆိုသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာ မင်းကြီး ဂျိမ်းစ်နာရာဂမ်ကလည်း ကျောင်းများတွင် လိင်ကိစ္စကို အလေးမထားစရာ အသေးအမွှားပမာ သဘောထား နေကြခြင်းကို ပြစ်တင် ဝေဖန်ထားသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ သိရတာတွေက လာပြီး တိုင်မှ သိကြရတာ။ လာမတိုင်တဲ့ အမှုတွေလည်း အများကြီးပဲ ရှိနိုင်တယ်။ ဒီလို ဖြစ်တာတွေကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရင် ကျောင်းတွေမှာ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ဆိုတာတွေကို ကောင်းကောင်း သင်ကြားခြင်း မရှိသေးဘူးဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကို သင်ဖို့ လိုသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လိင်ပညာရေးဆိုတဲ့ ဘာသာရပ် နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်”
“ကျွန်တော် နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ထိတွေးဖူးပါတယ်။ အရွယ် မရောက်သေးဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ တရားမဝင် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချမှုမျိုးတွေနဲ့ အများကြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်”
“ကျွန်တော်တို့ သုတေသန လုပ်ထားချက် အရကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တစ်ရက်ကို တရားမဝင် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချမှုပေါင်း ၃၀၀ လောက် ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာက နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် လိင်ပညာရေး ဆိုတာကို လျစ်လျူရှု ခဲ့ကြတာပါ။ ဘာသာရေးဘက်ကပဲ နည်းနည်းပါးပါး ထိန်းကျောင်းတာလေးတွေပဲ ရှိတယ်”ဟု ဂျိမ်းစ်က ဆိုသည်။
“ရှင်တို့အနေနဲ့ ကလေးတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဒီအတိုင်း လွှတ်မထားကြပါနဲ့။ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုင်းတွေကို သူတို့ ဝင်ကြည့်နေကြသလဲ။ ကလေးတွေ ဆိုတာ အလွန် စပ်စုစူးစမ်းလို ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို မျက်ခြေမပြတ်အောင် စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ စောင့်ရှောက်ရမယ့် အချိန်မှာ ပစ်ထားလိုက်ရင် ပန်းကောင်း အညွန့်ချိုးခံထားရသလို ဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်” ဟု ဟာမီဒါက ဆိုသည်။
ထိုအချက်ကို ဂျိမ်းစ်ကလည်း လက်ခံသည်။ ဆိုရှယ် မီဒီယာများကို သုံးခြင်းကအစ စောင့်ကြည့်သင့်ကြောင်း သူက ထောက်ခံသည်။ သူက…
“ကလေးတွေကို လွှတ်မထားပါနဲ့ ။ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ မထားပါနဲ့။ မိဘတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေက မဟုတ်တာတွေကို အင်တာနက်မှာ ကြည့်နေပြီး၊ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ မူကြိုတန်း ကလေးအရွယ်လောက်ကို အလေးထားစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်လိုက်ရင် မှားလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ကို မသုံးရဘူးလို့တော့ သွားပြီးမပိတ်ပင် လိုက်ပါနဲ့။ အဲဒါကပိုပြီး ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ အဲဒီနည်းကလည်း မထိရောက်နိုင်ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
“ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေက လူကြီးတွေ ကိစ္စတွေကို အရမ်း စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ရှင်းပြနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ နောက်တစ်ချက်က မိဘနဲ့ သားသမီးတွေကြားမှာ နှောင်ဖွဲ့တတ်တဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးကို ခိုင်မာအောင် ပိုပြီး လုပ်ရမယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီး သားသမီးတွေနဲ့ နေထိုင်ပြောဆိုပြီး လိင်ကိစ္စဆိုတာကို အသေးအမွှားကနေ၊ အလေးထားစရာ ကိစ္စတွေအထိ ရှင်းလင်း ပြောပြနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ကျောင်းတွေက မပြောရင် သူတို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးက မိဘတွေပဲ ရှိတာကြောင့် မိဘတွေက ပြောရမယ်။ ဒီလို ရှင်းလင်း ပြောပြနိုင်မှ သူတို့ လမ်းမှားကို ရောက်မသွားမှာပေါ့။ သူတို့ အရွယ်ရောက်လာချိန်အထိ သာယာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးရင် စိတ်လေတာတွေ၊ တလွဲ သာယာနေတာတွေ မရှိနိုင်ဘူးပေါ့”
“ဥပဒေကြောင်း အရလည်း တားဆီးကာကွယ် ပေးထားဖို့ လိုတယ်။ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ၁၂ နှစ် အရွယ်လေးတွေ အပြစ်ကျူးလွန်ရင် ဘယ်လို အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေလည်း ရှိဖို့လိုတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ မိဘများ ပညာရေးလှုပ်ရှားအဖွဲ့ (PAGE) ဥက္ကဋ္ဌ နူးဇီမာအဘဒူရာမင် ကလည်း ကျောင်းသားများကို လိင်ပညာရေးနှင့် ပညာပေးရန် အရေးကြီးကြောင်း သဘောတူသည်။ သို့သော် ပျံ့နှံ့နေသော လိင်အသားပေး ပုံများ၊ ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းများ နေရာတိုင်းလိုလိုတွင် အလွယ်တကူ ရရှိနေခြင်းကလည်း ပြဿနာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သူက ထောက်ပြထားသည်။ သူမ အနေဖြင့် ကျောင်းများရှိ ကွန်ပျူတာခန်းများတွင် မလိုအပ်သည့် လိုင်းများသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း မပြုနိုင်ရန် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးစနစ် (Fire-walls) များ တပ်ဆင်ထားရန် အကြံပြုထားသည်။
“ကျောင်းသားတွေကို Facebook မသုံးရဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်မျိုးတွေနဲ့ ပိတ်ပင်စရာတော့ မလိုဘူး။ သူ့အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားနဲ့သာ သုံးခွင့်ပြုသင့်တယ်” ဟုလည်း ဇီမာက ဆိုသည်။ သူက အင်တာနက်ကို ပိတ်ပင်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းတို့သည့် အဖြေ မဟုတ်ကြောင်း လက်ခံထားသည်။
“မိဘတွေအနေနဲ့ အကောင်း၊ အဆိုးကို ခွဲခြားပြီး သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြဖို့ လိုမယ် ထင်တယ်။ အမှား၊ အမှန် ခွဲခြားနိုင်အောင် လေ့ကျင့် သင်ပေးဖို့လည်း လိုလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ကို အသုံးမပြုနဲ့ ဆိုပြီး ပိတ်လိုက်ရင် ဒီနေရာပိတ်၊ အခြားတစ်နေရာ ရောက်သွားမှာပဲ။ ကလေးတွေကို မလုပ်ရဆိုပြီး တားမြစ်မယ့်အစား အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုသုံးရတယ် ဆိုတာတွေကို လမ်းညွှန် ပြပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ပြီး ကိုယ်လည်း အကျိုးရှိ၊ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း အကျိုးရှိတာတွေကို ထုတ်လုပ်မှု တစ်ခုခုအနေနဲ့ ရလဒ် ပေါ်လာအောင် သုံးစွဲခိုင်းရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်” ဟူ၍ ပြောကြားချက်သည် ခေတ်သစ် မိဘများနှင့် ဆရာများအတွက် စဉ်းစားစရာ ဖြစ်သည်။
Ref: Rising Cases of Minors Raping Minors, by New Sunday Times, 2013 October
မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း အရွယ်မရောက်သေးသည့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ဆိုးရွားသည့် အဖြစ်အပျက်များ
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ : မလေးရှားနိုင်ငံ ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းစာ တစ်စောင်၏ ဖော်ပြချက်အရ၊ သုံးတန်း တက်နေသော အသက် ကိုးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်သည် အိမ်နီးချင်း ၁၄ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး တစ်ယောက်နှင့် မှားယွင်းဖောက်ပြားကာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး သားယောက်ျားလေး တစ်ယောက် ဖွားမြင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက် : အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်ကြား လူငယ် ရှစ်ဦးသည် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို ကွာလာကူဘူဘာရူ မြို့ရှိ လူမနေသော အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင် မုဒိမ်း ပြုကျင့်မှုကြောင့် အဖမ်းခံကြရသည်။
ထိုမုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ခံရသည့် မိန်းကလေးသည် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့ မတိုင်မီကတည်းက ကျောင်းပြေးပြီး အိမ်ကိုလည်း ပြန်မလာခဲ့ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသည် သူ့အိမ်နှင့် မိုင် ၁၀၀ ခန့်ဝေးသည့် အိမ်ပျက်ကြီးသို့ ရောက်လာပြီး အိပ်စက်နေစဉ် ထိုသို့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက် : မာလက်ကာမြို့တွင် နေထိုင်သော လေးတန်း ကျောင်းသားနှင့် နှစ်တန်းကျောင်းသား နှစ်ယောက်သည် ပထမတန်း တက်နေသည့် ကျောင်းသူလေး တစ်ဦးကို အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်နေသည့် ဗီဒီယိုပြကွက်များ လူကြီးများကြည့်သည့် Website တစ်ခုပေါ်သို့ တက်လာသည်။
ထိုညီအစ်ကို နှစ်ယောက်သည် ကျောင်းရှိ ကွန်ပျူတာခန်းတွင် လူကြီးကြည့် ဇာတ်လမ်းများကို ကြည့်ခဲ့ပြီးနောက် ကျောင်းမှ ကောင်မလေးကို အိမ်သို့ ခေါ်သွားပြီး မဟားဒယား ကျင့်ခဲ့ကြောင်း မိန်းကလေး၏ မိခင်က ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ တန် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ တစ်ပြေးညီ ရောင်းပေးမည်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် (၆၇) ရပ်ကွက်ရှိ ရတနာနှင့် ဧရာဝဏ် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက ယင်းရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ အပါအ၀င် အိမ်ရာ ၀ယ်ယူလိုသည့် သူများအား တစ်ပြေးညီ ရောင်းချ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထိန်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
ယခင်က တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရ ၀န်ထမ်းများကိုသာ အဓိကထား ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော ရတနာနှင့် ဧရာဝဏ် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက အိမ်ရာဝယ်ယူလိုသည့် ပြည်သူ အားလုံးအတွက် တစ်ပြေးညီ ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
““ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ် မရှိပါဘူး။ အားလုံးကို ရောင်းပေးသွားမှာပါ။ စီမံကိန်း ပြီးတဲ့အခါ ၀ယ်ယူ နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ လူတွေကို စိစစ်ပြီးတော့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ရောင်းပေး သွားမှာပေါ့နော်။ ဒီစီမံကိန်းက အခန်းတွေကို ကျပ်သိန်း ၂၀၀ တော့ မှန်းထားတယ်။ အရစ်ကျတော့ ရောင်းပေးမယ်။ ဘယ်လောက်ထိ အရစ်ကျ ရောင်းပေး နိုင်မယ် ဆိုတာတော့ ပြန်တွက်ရဦးမှာ။ နိုင်ငံတော်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ စီမံ ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့””ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် ၆၇ ရပ်ကွက်သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ အစိုးရမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စိမ်းလန်းမြေ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ပြည်သူများအား မြေနေရာ နေထိုင်ခွင့်နှင့် စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ယင်းမြေပေါ်တွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်း စတင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ရပ်ကွက်တွင် ရတနာ၊ ဧရာဝဏ် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ရန် အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်တွင် မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း ဦးအောင်ကျော်ဦးက နေထိုင်သူများနှင့် စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်နေစဉ် အတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက အိမ်ခန်းများအား ဦးစားပေး အရစ်ကျ ရောင်းချပေးမည်ဟု နှုတ်ကတိပေးကာ လာရောက် ညှိနှိုင်းမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့ ညှိနှိုင်းမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း စီမံကိန်း စတင်ဖော်ဆောင်ချိန်တွင် နေထိုင်သူများအား ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် သတိပေးစာ ငါးကြိမ်ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဒဂုံအရှေ့ပိုင်း ၁၃၈၊ ၁၅၅ ရပ်ကွက်တွင် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ၁၀ ပေ ၆၀ ပေ မြေကွက်များနှင့် ပြောင်းရွှေ့စရိတ် ကျပ်နှစ်သိန်း ပေးကာ ပြောင်းရွှေ့ စေခဲ့သည်။
မူလနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၆၀ ကျော်မှာ ထိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ ခိုင်းခြင်းအပေါ် သဘောတူညီမှု မရှိဘဲ ဦးအောင်ကျော်ဦး၏ မူလပေးခဲ့သည့် ကတိအတိုင်းသာ ပြုလုပ် ပေးစေချင်ကြောင်းနှင့် ကတိမတည်ခြင်းအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ (၄)ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့ရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း ဧရိယာတွင် ပါဝင်သော ၆၇ ရပ်ကွက်နေ ဦးတင်ကြိုင်က ““ဦးတို့ကို အခုပြောင်းပေး တဲ့ နေရာက နေဖို့ ကော၊ ကျောင်းတက်ဖို့ကော အဆင်မပြေတဲ့ နေရာဖြစ်နေတယ်။ ဦးတို့ကတော့ ဒီတိုက်ခန်းတွေပြီးရင် ဦးအောင်ကျော်ဦး ပေးထားခဲ့တဲ့ ကတိအတိုင်း ရောင်းပေးေ စချင်တာ။ အလကား မယူပါဘူး။ အရစ်ကျ သွင်းပေးမယ်။ ငွေပမာဏ ကတော့ ဦးတို့က ပုံသေ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ဦးတို့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ကြည့်ပြီး လုပ်စေချင်တာပေါ့။ တစ်လကို သောင်းဂဏန်းလောက် ပေါ့။ မရှိလို့ လုပ်စားတဲ့ လူတွေလေ””ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရုံးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်စိုးက ““အခုဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှာ လျှောက်လွှာတွေ လာတင်ထားကြတာ အောတိုက်ပဲ။ ၀ယ်တဲ့ သူကတော့ သူ့ဟာသူ စဉ်းစားရမှာပေါ့။ အရစ်ကျလား၊ တကယ်လား ဘာမှမဆုံးဖြတ် ရသေးဘူးလေ။ တရားဝင်လည်း မပြောသေးဘူး။ အခုမှစပြီး တည်ဆောက်တုန်း မို့လို့ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဘယ်လောက်နဲ့ သတ်မှတ်မယ်။ ဘယ်လို အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီရင် ဘယ်လို ရောင်းမယ်ဆိုတာ ထွက်ဦးမယ်။ လာတင် ထားတဲ့ သူတွေကို ဒီမှာ စာရင်း လုပ်ထားတယ်။ စီမံကိန်းတွေ ပြီးရင်တော့ ဒီစာရင်းအတိုင်း သွားမှာပေါ့”” ဟု ပြောသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၆၇) ရပ်ကွက်ရှိ ရတနာ၊ ဧရာဝဏ် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ၏ ခန့်မှန်းဈေးနှုန်းမှာ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ခန့် ရှိနိုင်ပြီး အချို့သော ၀ယ်ယူချင်သူများသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရရုံးသို့ လျှောက်လွှာများ လာရောက် လျှောက်ထားလျက် ရှိသည်။
စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း ကျောင်းမုန့် ဈေးတန်းများအား စစ်ဆေးရာ၌ တားဆီးခံရ
အစိုးရ လက်အောက်ရှိ ကျောင်းမုန့်ဈေးတန်း၌ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ စတင် စစ်ဆေးသည့် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းအား အင်းစိန် အထက (၁) ကျောင်းမှ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ကျောင်း တာဝန်ရှိသူများက တားဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းအနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ တားဆီးခံခဲ့ရခြင်းမှာ မြို့နယ်အဆင့် ကျောင်း အာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက် မပါရှိသောကြောင့် တားဆီးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပြီး တခြား အထက(၆)နှင့် အထက (၅)၊ အလက (၁၀)နှင့် အမက (၁၂) ကျောင်းများသို့ စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ယင်းခွင့်ပြုချက် အမိန့် ပြန်လည် တောင်းခံခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
““မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရဲ့ လက်မှတ်မပါလို့ ကျောင်းမုန့် ဈေးတန်းတွေကို ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခွင့် မပြုဘူးလို့ ပြောတာ။ အဲဒါကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျောင်းမုန့် ဈေးတန်းတွေကို စစ်တာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ခွင့်ပြုရင် ရတယ်။ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးလောက်ထိ မလိုပါဘူး။ ဒါတွေက ကြိုးနီစနစ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေလို့ ထင်တယ်”” …. ဟု စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
စစ်ဆေးမှုအား တားမြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး လက်မှတ်ပါမှ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးရန် သဘောတူကြောင်း၊ ပညာရေးမှူး မပါသည့်အတွက် လက်မှတ် ယူဆောင်လာပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် လာရောက် စစ်ဆေး နိုင်ပါကြောင်းလည်း အထက (၁) ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးခင်ဇော်က စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဦးဗအုပ်ခိုင်က ““ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်း ဖြစ်တယ်။ ဟောပြောပွဲတွေလည်း လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးလည်း သိတယ်။ စာလည်း ကြိုပို့ထားတယ်။ မ၀င်ခင်လည်း ပြောပြီးသား။ အဲလို တားမြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် မ၀င်တော့ဘူး။ နောက်ထပ် ဒီလို ပြဿနာတွေ မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ နောက်ထပ် ဒီလို ထပ်တားဆီးမှုတွေ ဖြစ်လာရင် မသွား တော့ဘူး”” ဟု ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အထက (၁) ကျောင်းမှ တားမြစ်ခံ ခဲ့ရသော်လည်း အင်းစိန်မြို့နယ် အထက (၆) ကျောင်း၌မူ စစ်ဆေးခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ကျောင်းရှိ ကလေးများ ကောင်းကျိုးအတွက် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်သည့် အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထက(၆) ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နွယ်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
““ကလေးတွေအတွက် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တာပေါ့။ နောက်ထပ်လည်း ဒီလို စစ်ဆေးတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်း စားသုံးသူ အသင်းကို တောင်းဆိုပါတယ်”” ဟု ကျောင်း အုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နွယ်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ထပ်မံ ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းမှ ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းများအား ၀င်ရောက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည့်အပြင် အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းမှစ၍ လမ်းဘေး စားသောက်ဆိုင်များကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းအပြင် အခြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များအထိပါ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် သွားနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ် နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
တောင်ငူခရိုင်တွင် စစ်တောင်းမြစ်ရေ ထပ်မံမြင့်တက် လာသဖြင့် ရေဘေးဒုက္ခသည် ၃၀၀၀၀ နီးပါး ရှိလာပြီး စာသင်ကျောင်း များလည်း ပိတ်ထားရ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင်တွင် စစ်တောင်းမြစ်ရေ ထပ်မံမြင့်တက်ခြင်းကြောင့် ရေဘေးဒုက္ခသည် သောင်းဂဏန်းကျော် ရှိလာပြီး ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်များမှ စာသင်ကျောင်းများလည်း အရေးပေါ် ပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
တောင်ငူခရိုင်တွင် စစ်တောင်းမြစ်ရေသည် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ တောင်ငူမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ် ၆၀၀ စင်တီမီတာ အထက် ၆၂၄ စင်တီမီတာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၃၀ ရက်နှင့် ၃၁ ရက်များတွင် မြစ်ရေကျဆင်း သွားခြင်းမရှိဘဲ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် မွန်းလွဲ၁၂ နာရီခွဲ အချိန် တိုင်းထွာချက်အရ ၇၁၂ စင်တီမီတာသို့ စံချိန်တင် မြင့်တက်လာခဲ့ရာ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများဖွင့်လှစ် ထားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ စစ်တောင်းမြစ်ရေ ကျဆင်းသွားခြင်း မရှိဘဲ ထပ်မံမြင့်တက် လာခြင်းမှာ တောင်ငူခရိုင် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အဖြေရှာ မရသေးကြောင်း တောင်ငူခရိုင် မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ မြစ်ချောင်းနံဘေး ရေဘေးကြုံတွေ့ နေရသူများက ခရိုင်အတွင်းရှိ ဆည်တမံများမှ ရေလွှတ်ခြင်းကြောင့်ဟု ပြောဆိုမှုများရှိပြီး ဆည်ရေလွှတ်ခြင်းအား သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ကြိုတင်အသိပေး ကြညာခြင်း မရှိဟု ပြောဆိုကြသည်။
တောင်ငူမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် နံနက် ၆ နာရီအချိန် စာရင်းအရ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းပေါင်း ၃၀ အထိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ရေဘေးကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု ၂၇၆၇ နှင့်လူဦးရေ ၁၁၈၄၇ ဦးရှိခဲ့ပြီး ထပ်မံတိုးလာနိုင်ကြောင်း တောင်ငူမြို့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ သိရှိရသည်။ ရေတာရှည်မြို့နယ်တွင် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ စာရင်းအရ၊ ကျေးရွာပေါင်း ၅၁ ရွာမှ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၄၈၁ စု၊ လူဦးရေ ၁၇၆၁၉ ဦး နီးစပ်ရာ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လျက် ရှိကြောင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ထို့အပြင်ရေဘေး အန္တရာယ်ကြောင့် တောင်ငူခရိုင်အတွင်း၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နံနက် ၉ နာရီ စာရင်းအရ တောင်ငူမြို့နယ်မှ စာသင်ကျောင်း ၃၃ ကျောင်း၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်မှ ၄၈ ကျောင်း၊ အုတ်တွင်း မြို့နယ်မှ ၆ ကျောင်း၊ ထန်းတပင် မြို့နယ်မှ ၅ ကျောင်း စုစုပေါင်း စာသင်ကျောင်း ၉၂ ကျောင်း အရေးပေါ် ပိတ်ထားရကြောင်းနှင့် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန် ကာလတွင် ကျောင်းပိတ်ရက်များအား အစားထိုးပြန်လည် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တောင်ငူခရိုင် ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
(တောင်ငူမြို့နယ်အတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတစ်ခုရှိ ရေဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား တွေ့ရစဉ်)
၁.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၉၄၅အချိန် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအနောက်ရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်းအတိုင်း ယာဉ်မောင်း သန်းထိုက် (ဘ)ဦးမြဦး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်
နေသူ မောင်းနှင်လာသော ၅ဌ/---- ထော်လာဂျီယာဉ်သည် ကျောင်းလမ်းဆုံ
အနီးအရောက် လမ်းဖြတ်ကူးသူ မသဇင်ထွေး၊ (၃)နှစ်(၆)လ (ဘ)ဦးနိုင်ဝင်း၊
ရွာမအနောက်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေသူအား တိုက်မိသဖြင့် မသဇင်ထွေးတွင် ဦးခေါင်းပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင်
သေဆုံးသွားသဖြင့် ထော်လာဂျီယာဉ်မောင်း သန်းထိုက်အား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၁၃၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၀၄-က ဖြင့်
အမှုဖွင့်ပြီး ဖမ်းဆီးအရေးယူထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စက်သုံးဆီ စရိတ် ကျပ် ကိုးသိန်း ၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးစရိတ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ စသည်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနများ သာမန် အသုံးစရိတ်များ သုံးစွဲမှု အပေါ် လွှတ်တော်တွင် ဝေဖန်
Friday, 01 November 2013 04:46
ရန်ကုန် ၊ အောက်တိုဘာ ၃၁။ ။ လက်ရှိ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေစီမံကိန်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေး အသုံးစရိတ်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အသုံးစရိတ်များကို ပြန် လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ က အောက်တို ဘာ ၃၁ ရက်ကကျင်းပသည့် ပြည်ထောင် စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့ ပြောကြားလိုက် သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ် ဘဏ္ဍာ နှစ် ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ ကြမ်း၏ ရငွေသုံး ငွေများ နှင့် ပတ် သက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုးဦးမှ လွှတ် တော်သို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သို့တင်ပြရာတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း ကျပ် သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်နေမှုများ၊ ဝန်ကြီး ဌာနများမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံး စရိတ်ထက် သာ မန် အသုံး စရိတ် များတွင် ပိုမိုသုံးစွဲနေခြင်းများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေ ဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် တင် ပြကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄) ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ''နေ ပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ရေပေးဝေရေးအ တွက် ကျပ်သိန်း ၁၃ဝဝဝကျော် သုံးစွဲဖို့နဲ့ နေပြည်တော် ကောင်စီ က လမ်းလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ထပ်မံတောင်းခံတင် ပြထားတယ်။ ပြည်ထောင်စုနယ် မြေတစ်ခုတည်း နိုင်ငံတကာအ ဆင့်တိုးတက်နေပြီး ကျန်တဲ့နေ ရာတွေက ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲဖြစ် နေရင် ဒီနိုင်ငံကြီး တကယ်တိုး တက်ရဲ့ လား။ လက်ရှိသုံးစွဲမှုတွေ ကို သင့် မသင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်အနေဖြင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါ တယ်''ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်သို့ တင်ပြသည်။
ယင်းအပြင် ဝန်ကြီးဌာန များ၏ သာမန်အသုံးစရိတ်များ ကိုပါ လျှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သမဝါယမ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် သွားလာစရိတ် (စက် သုံးဆီစရိတ်) ကျပ်ကိုးသန်းကို တောင်းခံ ခဲ့ကြောင်း ၊ အလားတူ မွေးမြူရေးရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှရရှိသည့် ဘတ်ဂျက် ထက် ပိုမိုသုံးစွဲရန် တင်ပြထား ကြောင်း၊ ယင်းတို့ကိုပြန်လည်စစ် ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါရန် လွှတ် တော်ကိုယ်စား လှယ် များ မှ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထန်းတပင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဦးစိန်ထွန်းက ''မန္တလေးက အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကဆိုရင် ဧည့်ခံကျွေးမွေးစရိတ်က ကျပ် သိန်း၅ဝဝရှိတယ်လို့ တင်ပြတယ်။ စက်သုံးဆီအသုံးစရိတ်တွေအပါ အဝင် သာမန် အသုံး စရိတ်များ ကို ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်'' ဟု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံး စွဲရေး ဥပဒေကြမ်းပါရသုံးငွေများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးချက်များ ကို နိုဝင်ဘာ ၅ရက်တွင်ကျင်းပ မည့် ပြည်ထောင် စု လွှတ် တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမ နေ့တွင် လွှတ်တော်အဆုံးအဖြတ် ကိုရယူမည်ဟု ကြေညာသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့ တွင်၊ ဆိုင်ကယ်ဆီးနင်းလာသူ အမျိုးသမီးများကို ဓား၊ သုံး မြှောင်သံပြားများဖြင့် ခုတ်ပြီးဆိုင် ကယ်လုယက်မှု စက်တင်ဘာ (၂၃)နှင့်(၂၄)ရက်နေ့များတွင် ဖြစ် ပွားခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ(၂၃) ရက်နေ့ ည(၇း၀၀)အချိန်တွင် မူဆယ်မြို့၊ အမှတ်(၂)ဈေးမှ ဆိုင် ကယ်နှင့်အိမ်ပြန်လာသော မခင် စံပယ်ဖြူကို မူဆယ်မြို့၊ တောင် ရပ်ကွက်၊ ခိုင်သစ္စာ ကားပစ္စည်း ရောင်းသည့်ဆိုင်လမ်းကြားတွင် အသက်(၁၉)နှစ်ခန့်လူငယ်တစ်ဦး ကဆိုင်ကယ်စီး လာစဉ် ဓားဖြင့် တစ်ချက်ခုတ်လိုက်သဖြင့် ဘယ် ဘက်ပါး၊ ညာဘက်ပါးနှာခေါင်း တို့တွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာရရှိပြီး ဆိုင် ကယ်လဲကျစဉ် ဆိုင်ကယ်ကိုလုယူ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း၊ (၂၄-၉-၂၀၁၃)နေ့တွင် မူဆယ်မြို့၊ ပန်လုံ ကွက်၊ ပန်လုံလမ်း၊ စည်ပင် သာယာဝန်ထမ်း အိမ်ယာနေထိုင် သူ ဒေါ်အေးမသည် သမီးဖြစ်သူ မထက်ထက်အိစံနှင့်အတူ ဆိုင် ကယ်စီးလာရာလူပြတ်သောလမ်း နေရာတွင် လူတစ်ဦးတွေ့ရှိရပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုပေးရန် ခြိမ်းခြောက်၍အလျား ၆ လက်မခန့်အနံ ၁၁၂””လက်မခန့်စတီးဓားဖြင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူ မထက်ထက်အိစံအားခုတ်ရာ မျက်နှာတွင်ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ် ချက်ရရှိပြီး ဆိုင်ကယ်တိမ်းမှောက် သွားစဉ်အော်ဟစ်အကူအညီ တောင်းရာ ထိုလူမှာဆိုင်ကယ်ကို လု၍ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း မူဆယ်ရဲစခန်းတွင် အသီးသီးတိုင် ကြားခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းထောက် လှမ်းခဲ့ရာမူဆယ်မြို့၊ကောင်းမှုတုံ ရပ်ကွက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ တရားမ၀င် ခိုး၊ထွက်ပေါက်ဖြစ် သော၊ ရွှေနဂါးဝင်/ထွက် ပေါက် အနီးတွင် အိုက်ထွန်း(ခ)၀င်းထွန်း (ခ)ထွန်းထွန်း(၂၅)နှစ် တရုတ် နိုင်ငံကျယ်ဂေါင်တွင်နေထိုင်သူ အား စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင် ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုစစ်ဆေးရာ တောင်ရပ်ကွက်၊လမ်းကြားတွင် လုယက်လာသည့်ဆိုင်ကယ်အား ရောင်းချခဲ့ပုံနှင့် အမျိုးသမီးကို ဒဏ်ရာရရှိအောင်ခုတ်ခဲ့သည့်သုံး မြှောင်ပုံသံပြားအား လွှင့်ပစ်ခဲ့ သည့်နေရာပြသပြီးအပ်နှံခဲ့ကာ ကျူးလွန်ပုံကို ပြသခဲ့သည်။
ဆက်လက်စစ်ဆေးရာတွင် ဒေါ်အေးမတို့သားအမိနှစ်ယောက် စီးလာသည့်ဆိုင်ကယ်ကိုလည်း အရိုးအ၀ါရောင်စတီးဓားဖြင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသူကိုဖြတ် ခုတ်ကာ ဆိုင်ကယ်ကိုလုယက်ပုံ၊ စတီးဓားလွှင့်ပစ်ခဲ့သည့်နေရာများ ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လုယူခဲ့ သော ဆိုင်ကယ်(၂)စီးအား စုံး စမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးထိရောက် ပြစ်ဒဏ်ရရှိရေးဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သားအိမ်-ကင်ဆာ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ တူတူပါပဲလား။ မတူဘူး ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုတွေ ခံစားရတတ်တယ်၊ ဘာလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါသလဲ။ ဆေးရုံမှာ စစ်မယ်၊ သွားမယ်ဆိုရင် သားအိမ်-ကင်ဆာ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ တူတူပဲ ရှိနေရင် သိရလား။ သို့မဟုတ် ၂ မျိုးခွဲ စစ်ရတာလား။ အင်္ဂလိပ်လို သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာကဘာ၊ သားအိမ်-ကင်ဆာကဘာ ခွဲပြောရလား။ အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို စာလုံးပေါင်းပါသလဲ။
သားအိမ်-ကင်ဆာ Uterine Cancer နဲ့ သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာ Cervical Cancer မတူပါ။ အခုရေးမှာက သားအိမ်-ကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cervical Cancer (Ca Cx) သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ နဲ့ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး (HPV) တွေကို တွဲဖတ်ပါ။
သားအိမ်-ကင်ဆာမှာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ ပိုအဖြစ်များတဲ့ Endometrial cancer နဲ့ Uterine sarcomas တွေ ဖြစ်တယ်။ စဖြစ်တဲ့ သားအိမ်အလွှာ မတူလို့ မတူကြတာပါ။ Endometrial cancer ကို Adenocarcinoma လဲခေါ်တယ်။ သားအိမ်-ကင်ဆာ ထဲမှာ ၉၅% ဖြစ်တယ်။ Sarcoma ဆိုတာက ၂-၄ % ရှိပြီး၊ Carcinosarcoma နဲ့ Endometrial stromal sarcoma တွေကတော့ ရှားတယ်။
သားအိမ်မှာ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အလုံးတွေ ဥပမာ Fibroids နဲ့ Endometriosis တွေ ရှိတယ်။ Endometrial hyperplasia ဆိုတာလဲ ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကနေစပြီး သံသယ ရှိရတယ်။
1. ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းတာ၊ သွေးစွန်းတာ၊ ၉ဝ% လောက်က ကြားရက် ဒါမှမဟုတ် သွေးဆုံးပြီးနောက် သွေးဆင်းတယ်။ အဲလိုဖြစ်သူတိုင်းလဲ သားအိမ်-ကင်ဆာတော့ မဟုတ်ပါ။
2. ၁ဝ% လောက်မှာ အဖြူဆင်းတာမျိုးလို တခုခု ဆင်းတတ်တယ်။
3. ဆီးသွားရတာ ပြဿနာရှိတာ၊ ဆီးစပ်နေရာ နာတာ၊ အိမ်ထောင်နဲ့ နေရင် နာတာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
4. ဆီးစပ်မှာ အလုံး စမ်းလို့ရတာ၊ လူက ပိန်ပိန်လာတာဆိုရင်လဲ သတိရှိရမယ်။ ဒီလို ဖြစ်သူတွေက ရောဂါ နောက်ပိုင်းကျလာမှ ဖြစ်တတ်တယ်။
• Endometrial biopsy နည်းဖြစ်ဖြစ်၊ Dilation and curettage (D&C) နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အသားစ ထုတ်ယူ စစ်ဆေးမယ်။ Endometrial biopsy ကို အများဆုံး လုပ်တယ်။
• Hysteroscopy နည်းလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ Transvaginal ultrasound, Sonography, Cystoscopy and proctoscopy, Computed tomography (CT) နဲ့ Magnetic resonance imaging (MRI) နည်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။
• Positron emission tomography (PET), Chest x-ray, Complete blood count, CA 125 blood test တွေပါ ဆက်လုပ်နိုင်သေးတယ်။
ဘယ်လို အမျိုးသမီးတွေမှာ Endometrial cancer သားအိမ်-ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်လဲ။
• Hormone levels ဟော်မုန်း ရှိတာ မတူကြဘူး။ (အီစထိုဂျင်) များရင် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို Estrogen therapy ဟော်မုန်းပေး ကုရတတ်တယ်။ ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Estrogen နဲ့အတူ Progesterone ပေးတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားဟာတွေ ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။ ဥပမာ ရင်သား-ကင်ဆာ၊ သွေးခဲရောဂါ။
• Birth control pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးကြောင့် သားအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
• တသက်တာမှာ ရာသီလာချိန်များရင် မကောင်းဘူး။ အပျို စောဖြစ်တာနဲ့ သွေးဆုံး နောက်ကျတာကို ပြောတာ။
• Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ များသူတွေမှာ အဖြစ်နည်းတယ်။
• Obesity အဝလွန်သူ အဖြစ်များမယ်။ အဆီထဲရှိနေတဲ့ (အီစထိုဂျင်) ကနေ တခုခုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• ရင်သား-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဘို့နဲ့ ကုသဘို့မှာ သုံးတဲ့ Tamoxifen ဆေးကနေ နည်းနည်းလေး ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
• Ovarian tumors (Granulosa-theca cell tumor) ဖြစ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
• Polycystic ovarian syndrome (PCOS) ရှိနေသူလဲ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
• Intrauterine device (IUD) ကိုယ်ဝန်တား-ပစ္စည်းထည့်ထားသူတွေလဲ နဲနဲလေး ပိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။
• Age အသက်ကြီးလေး ပိုလေ။
• Diet and exercise အဆီစားများသူ၊ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်သူတွေ ပိုများတယ်။
• Diabetes ဆီးချို ရှိသူတွေမှာ ၄ ဆ ပိုများတယ်။
• Family history မိသားစုထဲ တယောက်မက ဖြစ်တာလဲ တွေ့ရတယ်။
• Breast or ovarian cancer နို့-ကင်ဆာနဲ့ မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာ ရှိသူတွေမှာ လာဖြစ်တတ်သေးတယ်။
• Prior pelvic radiation therapy တခြားရောဂါကြောင့် ဓါတ်ကင်သူတွေ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
• Endometrial hyperplasia ရောဂါ ဖြစ်နေရင် ပိုနိုင်တယ်။
Endometrium Carcinoma အတွက် 2010 Figo staging system အရ ရောဂါအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေက -
• IA သားအိမ်မှာသာရှိတယ်။ Myometrial invasion သားအိမ်အလည်လွှာရဲ့ တဝက်အထိ မရောက်သေးဘူး။
• IB သားအိမ်မှာသာရှိတယ်။ Myometrial invasion သားအိမ်အလည်လွှာရဲ့ တဝက်ထက် ကျော်ပြီ။
• II သားအိမ်မှာသာရှိတယ်။ Cervical stromal invasion သားအိမ်ဝထဲ ရောက်နေပြီ။
• IIIA သားအိမ်ဘေးက Serosa or Adnexa (တစ်ရှူး) တွေဆီ ရောက်နေပြီ။
• IIIB မွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနား) နဲ့ Parametrial involvement ဘေးနား ရောက်နေပြီ။
• IIIC1 Pelvic lymph node involvement အနီးအနားက တက်စေ့တွေဆီ ရောက်နေပြီ။
• IIIC2 Para-aortic lymph node involvement တခြားနေရာက တက်စေ့တွေဆီ ရောက်နေပြီ။
• IVA Bladder and/or Bowel mucosa ဆီးအိမ်၊ အစာဟောင်းအိမ်ထိ ရောက်နေပြီ။
• IVB Distant metastases တခြား အဝေးနေရာတွေဆီ ရောက်နေပြီ။
• Stage I = Surgery ခွဲစိတ်နည်း၊ Total Abdominal Hysterectomy and Bilateral Salpingo-Oopherectomy (TAH-BSO) ခွဲစိတ်နည်း။ ခွဲစိတ်အပြီး Radiation ဓါတ်ကင်နည်းမှာ Vaginal Brachytherapy (VB) နည်း ဒါမှမဟုတ် Pelvic Radiation ဒါမှမဟုတ် ၂ နည်းလုံး သုံးတယ်။ Chemotherapy ကင်ဆာဆေး အဖြစ် Carboplatin နဲ့ Paclitaxel, Ifosfamide with Paclitaxel ဆေးတွေ သုံးတာ များတယ်။ တခါတလေ Cisplatin, Ifosfamide နဲ့ Doxorubicin တွေကို သုံးတယ်။ ခွဲဘို့ မသင့်သူတွေကို ဓါတ်ကင်တာ လုပ်ပေးတယ်။ အဆင့် (၁) ကလေးလဲ လိုချင်သေးရင် မခွဲဘဲနဲ့ Progestin ဟော်မုန်းဆေးပေးနည်းလဲ သုံးတယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ခွဲစိတ်ပြီး ထပ်ဖြစ်သူတွေမှာ ဗဂျိုင်းနားမှာ လာဖြစ်တတ်လို့ Vaginal Brachytherapy နည်းပါ လုပ်ပေးရတာ ဖြစ်တယ်။ တချို့ဆေးရုံတွေက Pelvic area တင်ပါးဆုံနေရာ တခုလုံးကို External beam radiation ဓါတ်ကင်နည်း လုပ်ပေးတယ်။
• Stage II = ခွဲစိတ်နည်းက Radical hysterectomy နည်းလုပ်ရတယ်။ သားအိမ် တခုလုံး ထုတ်မယ်။ Bilateral salpingo-oophorectomy (BSO) မျိုးဥအိမ်နဲ့ သားအိမ်ပြွန်တွေ ထုတ်မယ်။ Pelvic and Para-aortic lymph node dissection (LND) အနီးအနားတဝှိုက်က တက်စေ့တွေပါ ထုတ်မယ်။ ပြီးရင် Radiation ဓါတ်ကင်တာ ဆက်လုပ်မယ်။ Vaginal brachytherapy နဲ့ External pelvic radiation ဓါတ်ကင်နည်း သုံးတယ်။ ဓါတ်ကင်ပြီးမှ ခွဲတာလုပ်တာမျိုးလဲ ရှိသေးတယ်။ ခွဲထုတ်တဲ့ တက်စေ့တွေကို ကင်ဆာဖြစ်နေ-မနေ စစ်ရတယ်။
• Stage III = Surgery ခွဲစိတ်မယ်။ Chemotherapy ကင်ဆာဆေး နဲ့ Radiation ဓါတ်ကင်တာတွေကို ၁ ခု ဖြစ်ဖြစ်၊ ၂ ခု ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်။ Radiation လုပ်တာကို Pelvis တနေထဲ ဖြစ်ဖြစ် Abdomen နဲ့ Pelvis နှစ်ခုလုံး ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်။
• Stage IV = Combinations of chemotherapy drugs ဆေးတွေ တွဲပေးနည်း သုံးနိုင်တယ်။ Paclitaxel (Taxol) Doxorubicin (Adriamycin) နဲ့ Carboplatin ဒါမှမဟုတ် Cisplatin ဆေးတွေ သုံးတယ်။ Cisplatin, Ifosfamide နဲ့ Paclitaxel တွေကိုလဲ တွဲတတ်တယ်။
• Papillary serous carcinoma or clear cell carcinoma ဆိုတာတွေက High-grade cancers နောက်ကျတဲ့ အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်ရင် TH/BSO, pelvic and para-aortic lymph node dissections, and Pelvic washings တွေအပြင် Omenetectomy နဲ့ Peritoneal biopsies တွေပါ လုပ်မယ်။ ခွဲပြီးရင် Chemotherapy ကင်ဆာဆေး နဲ့ Radiation therapy ဓါတ်ကင်တာ လုပ်မယ်။ Carboplatin and Paclitaxel or Cisplatin and Doxorubicin ဆေးတွေ သုံးတယ်။
• Recurrent endometrial cancer ပြန်ဖြစ်ကင်ဆာဆိုတာ အနီးအနားလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဝေးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Pelvis တင်ပါးဆုံမှာဖြစ်ရင် Radiation therapy ဓါတ်ကင်မယ်။ တခြားနေရာဆိုရင် အဆင့် (၄) ကုသသလို လုပ်မယ်။ Progesterone hormone therapy ဒါမှမဟုတ် Chemotherapy လုပ်နိုင်တယ်။
ကင်ဆာဖြစ်ရင် ၅ နှစ်အထိနေနိုင်သူ ရာနှုန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာ သတ်မှတ်ထားရတယ်။ Endometrial adenocarcinoma သားအိမ်-ကင်ဆာ ဖြစ်သူတွေမှာ -
• သားအိမ်အပြင် မပြန့်သေးသူ ၉၆%၊
• သားအိမ်အပြင် ပြန့်နေသူ ၆၆%၊
• နောက်ပိုင်းအဆင့် ရောက်နေသူ ၂၅%၊
• African American women အသားမဲ အမျိုးသမီးတွေမှာ တခြားလူတွေထက် ၁ဝ% နည်းတယ်။
5 year survival rate တိတိကျကျ အဆင့်အရ ပြောရရင် -
• I-A 90%
• I-B 88%
• I-C 75%
• II 69%
• III-A 58%
• III-B 50%
• III-C 47%
• IV-A 17%
• IV-B 15%
Uterine Sarcoma အမျိုးအစားဆိုရင် ၅ နှစ်အထိနေနိုင်သူ -
• သားအိမ်အပြင် မပြန့်သေးသူ ၅ဝ%၊
• သားအိမ်အပြင် ပြန့်နေသူ ဝ-၂ဝ%၊
အမျိုးသမီး မျိုးပွါးလမ်းမယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာတွေ -
• Endometrial cancer သားအိမ်-ကင်ဆာက မျိုးပွါးလမ်းဖြစ်တာထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ သေဆုံးရမှုမှာ သတ္တမနေရာ လိုက်တယ်။ စောစောသိရင် ကုလို့ ရတာကို ပြနေတာ ဖြစ်တယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်တွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ စောသိသူတွေကို ခွဲစိတ်ပြီးနောက် Estrogen replacement ဟော်မုန်း ဆေးပါပေးရင် ပြန်ဖြစ်နှုန်း နည်းတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီနည်းရဲ့ မကောင်း ကျိုးဆက်တွေကို အသေအခြာ လေ့လာရတယ်။ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Heart attacks နှလုံးသွေးနည်းတာ Stroke လေဖြတ်တာ နဲ့ Breast cancer ရင်သား-ကင်ဆာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ ဟော်မုန်းဆေးကို နဲနဲလေးနဲ့ ရက်တိုတိုသာ ပေးဘို့ လုပ်လာတယ်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ အမဲ-အမျိုးသမီးတွေဟာ အဖြူတွေနဲ့ အာရှသူတွေထက် ၂ ဆ ပိုဖြစ်တယ်။
• Ovarian cancer မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာက ဒုတိယလိုက်တယ်။ အသက် ၅ဝ ကျော်မှအဖြစ်များတယ်။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မက ဖြစ်တယ်။
• Cervical cancer သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာက တတိယလိုက်တယ်။ ကြားရက်သွေးဆင်းတာ နဲ့ တခုခုဆင်းတာ တွေမှာ သားအိမ်-ကင်ဆာနဲ့ တူတယ်။ သားအိမ်အဝမှာ ဖြစ်ရင် ယောက်ျားနဲ့ ဆက်ဆံအပြီးမှာလဲ သွေးထွက်လာ တတ်တယ်။ Human papillomavirus (HPV) ပိုးက လိင်လမ်းကနေ ဝင်တယ်။ စောစောသိအောင် Pap smears လုပ်နေသင့်တယ်။
• Vaginal cancer ဗဂျိုင်းနား-ကင်ဆာကလဲ ရှားတယ်။ အသက်ကြီးမှ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘာမှ လက္ခဏာ မရှိတာနဲ့ စတယ်။ ရှိလာရင် နာလာမယ်၊ တခုခုဆင်းမယ်၊ သွေးထွက်မယ်။
• Vulvar cancer အမျိုးသမီး အပြင်အင်္ဂါ (မိန်းမကိုယ်) ကင်ဆာက ရှားတယ်။ ဖြစ်တာလဲ နှေးတယ်။ အသက်ကြီးမှ ဖြစ်တယ်။ အသက်အကြီးဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ယားမယ်၊ နာမယ်၊ သွေးထွက်မယ်၊ ပူလောင်နေမယ်၊ တခုခု ဆင်းမယ်။